စိတ်ရောဂါသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပါ (ဆွီဒင်) စိတ်ရောဂါဆရာ Goran Sedvallson ဆီးရောဂါပါရဂူ Stefan Arver, စိတ်ပညာရှင် Inger Björklund (2013) - Your Brain On Porn
အဖြစ်မှန်, စိတ်ရောဂါအထူးကု Goran Sedvallson (ဆွီဒင်) အလုံအလောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Stefan Arver, psychotherapist Inger Björklund (2013)
ဤဆောင်းပါး (ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်) ကညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွမ်းကျင်သူသုံး ဦး ကိုကိုးကားထားသည်။ RFSU ဆေးခန်းမှစိတ်ပညာရှင် Socionomen Inger Björklund; Stefan Arver ၏ဆရာဝန်အကြီးအကဲနှင့် Hudding ရှိ Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှိ Andrology နှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာဌာန၏အကြီးအကဲ၊ စိတ်ရောဂါ Goran Sedvallson ။
လူငယ်များသည်“ ညစ်ညမ်းသောလိင်အင်္ဂါများ” ခံစားနေကြရသည်။ ဝဘ်ပေါ်၌သူတို့သည်တူညီသောပြproblemနာရှိသူများကိုရှာဖွေကြသည်။ သားကောင်တစ် ဦး က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတုန်းကျွန်မဟာမိန်းကလေးနဲ့မဟုတ်ဘဲညစ်ပတ်နေတယ်။
အမေရိကန်၏ Your Brain On Porn ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသည့်အခါအနေအထားမရနိုင်သောအမျိုးသားများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းက ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်အပေါ်မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိသနည်း၊ ၎င်းသည်တကယ့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမရရှိနိုင်သည့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော“ အလင်းရောင်ပုံစံများ” ကို ဦး တည်စေသည်။
အခုတော့ဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆွီဒင်ရောက်ရှိကြပုံရသည်။ ပိုက်ကွန်တွင်ရှိရာယောက်ျားထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်အများအပြားဆွေးနွေးမှုဟာ Thread ရှိပါတယ်, လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးအနေအထားရတဲ့၏ပြဿနာကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အများအပြားမှဘုံ porn ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းသူတို့ကအရမ်းမကြာခဏ masturbated သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့အပါအဝင်ခြင်းဖြင့်မေးခွန်းလွှာလေ့လာမှုများတစ်ဆယ်လုလင်ထဲကကိုးကပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမှန်မှန် porn မှာရှာဖွေနေကြောင်းပြအမျိုးသမီးငယ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတစ်ဆယ်သုံးခုရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးများမကြာခဏသို့သော်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကျေနပ်နိုင်ဖို့အတွက်ယောက်ျားတွေသူတို့စိတ်လှုပ်ရှားရဖို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုတုံ့ပြန်ကြသည်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ကသူသည်တစ်ခုခုနှင့်“ မမှန်ကန်တဲ့” မဟုတ်ကြောင်းနှင့်သူရည်းစားနှင့်အတူရှိနေစဉ်သူဘာကြောင့်ရာထူးမရရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ သူက porn ကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ အိပ်ရာပေါ်၌အိပ်လျက်အိပ်နေသောအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောမိန်းမသည်သူမနှင့်အခြေအနေတစ်ခုလုံးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းခဲ့ပါ။
Socionomen Inger Björklund, ငါးနှစ်စတော့ဟုမ်းအတွက် RFSU ဆေးခန်းမှာ psychotherapist, ပို. ပို. ငယ်ရွယ်ပြီးအသက်ကြီး porn အများကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိုက်ထူပြဿနာများရှိသည်ထင်ရသူကပြောပါတယ်။ သူမနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အခြေအနေတွင်ပြဿနာကိုကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲအခက်အခဲတွေ porn ခွန်အားမရှိခြင်းစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။
- သို့သော်၎င်းသည်ခိုင်မာသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးရန်အဖြစ်မှန်သည်လုံလောက်မှုမရှိဟုထင်ရသည် လူသား၏သွားများသည်တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အသစ်သောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနာရီနှင့်အမျှရရှိနိုင်သည်။ In-Björklundက I-phones, I-pads, computer, televise - ဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
-“ အစစ်အမှန်” ဘဝ၌၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်သူမည်သူမဆိုသည်မည်သူနှင့်မျှဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ညစ်ညမ်းသောအစာအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်ပုံမှန်ဘ ၀ နှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောလိင်ဘဝကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေသည်။
ပြဿနာကဒီမျိုးကိုမဆိုဖြေရှင်းချက်ရှိပါသလား? ဟုတ်ပါတယ်, Inger Björklundဖွကွေား။ အရေးအပါဆုံးအရာကိုသင်အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူမှာညပ်မိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပြဿနာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်သင်ပြောင်းလဲပစ်ချင်တစ်ခုခုအဖြစ်၎င်းတို့၏အပြုအမူ-သတ်မှတ်မိမိကိုယ်မိမိရန်ဖြစ်ပါသည်။
- အကယ်၍ သင်ပုံစံကိုချိုးဖျက်ရန်အကူအညီတောင်းလိုပါက၎င်းသည်လိင်မှုဘဝကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကုထုံးကိုပြောဆိုခြင်းနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကြိုးစားပါက။
အင်တာနက် site ပေါ်တွင်သူတစ်ဦးကညာခဲ့ 18 များ၏အသက်အရွယ်သည်အထိလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးလုလင်ကိုရေးသားခဲ့သည်။
သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သောအခါသူသည်မည်မျှကြိုးစားခဲ့သည်ကို“ ၀ ီလီနှင့်မရော” ပါ၊ ထိုလူငယ်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းမှစတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုတွင်သူသည်ပြtheနာများစွာကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ဆက်လုပ်သည်
"ဒါဟာတရားခံဖြစ်သကဲ့သို့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအဖြစ်ထွက်လာတယ်။ သငျသညျအနညျးငယျအတှကျ - ငါ့အဘို့ကခြောက်နှစ်ကာလ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn များသောအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ဒါအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အလင်းမှ dopamine receptors အကြောင်းကို ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြုရ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ချိုပြီးဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး porn ကိုကြည့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်။ ငါ့အိပ်ရာရှေ့မှာအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်အိပ်နိုင်အောင်ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာလောက်မလွယ်ဘူး။ ”
Stefan Arver ၏ဆရာဝန်အကြီးအကဲနှင့် Huddinge ရှိ Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှိရောဂါဗေဒနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန၏အကြီးအကဲ။ သူက“ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော” အဖြစ်အပျက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကလိင်မှတဆင့်လိင်အကြောင်းအလွန်အမင်းဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာစိတ် ၀ င်စားမှုလျော့သွားတယ်ဆိုတာကိုသူကြားဖူးတယ်။
အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရှိသောလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပါကအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ လူမပါဘဲနေထိုင်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကမ်းလှမ်းသကဲ့သို့လိင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမည်သို့လည်ပတ်သင့်သည်ကိုလက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ရင်းနှီးမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုခံစားရရန်အခက်အခဲများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရာထူးတစ်ခုရရှိခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Karlskrona, 1984 ကတည်းကတိကျတဲ့ sexological ဧည့်ခံအတွက်ဆေးရုံတွင်။ တစ်ဦးစိတ်ရောဂါနှင့် psychotherapist အဖြစ်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမန်နေဂျာ Goran Sedvallson, သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုမကြာခဏမှားစက်နှိုးပုံစံများအတွက်အဆုံးသတ်ကပြောပါတယ်။
- ယောက်ျားများသည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်သောအခါအမျိုးသားများသည်မပျော်နိုင်၊ ပျော်မွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုအလွန်နှိပ်ထားတာကြောင့်သူတို့ဟာတကယ့်ဘဝမှာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကဒီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Goran Sedvallson မှရရှိနိုင်သောတိုးပွားလာသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းစေသောပြwithနာကကြီးထွားစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Karlskrona တွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က fifty ည့်သည်သစ်ငါးဆယ်ခန့်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ လူနာများသည်အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၈၀ ကြားအကြားရှိကြပြီးသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောပြproblemsနာများရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ညစ်ညမ်းသောလိင်အင်္ဂါများ” ခံစားခဲ့ရသောလူငယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်ယောက်ျားများကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကဲဖြတ်ချက်အနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လူငယ်ဆေးခန်းများနှင့်အလားတူအရာများအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ယခုအခါအားလုံးအကူအညီတောင်းနေကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အနေနှင့်၊ ဥပမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်သင်နေစဉ်သင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းဝန်ခံရန်မလွယ်ကူပါ။
မူရင်းဆောင်းပါး - http://www.dn.se/insidan/verkligheten-inte-tillrackligt-upphetsande/